Category: dr gurmeessaa
Hagamis barb aachisaadhaa? Ilaalchi osoo hin dhukkubsatiin yaalamuu jedhu biyya keenya keessatti yeroo hedduu kan baratamaa hin taanee dha. Namoonni yeroo hedduu kan of qorachiisan yoo haalonni gargaraa isana dirqisiisan akka qacarrii hojiiwwan gargaraa, gara biyyoota biraa deemuu fi kkf yoo isaan mudatedha. Dhukkuboota akkasii kana kan ofirratti beekuu dandeenyu fi ofirraa ittisuu dandeenyu yoo osoo hin dhukkubsatiin mana yaalaa yokaan kilinika dhuunfaa gargaraa deemnee of qorachiifne qofa.
Barteen yokaan amalli osoo hin dhukkubsatiin dhukkuboota akkasii of qorachiisuu biyya keenya keessatti maal fakkaata kan jedhuuf deebii dhuunfaama keenya irraa kaanee ilaaluu dandeenya. Dabalataan mallattoo dhukkubaa kamiyyuu osoo ofirratti hin argiin of qorachiisuun ammoo dhukkuboota lubbuu galaafatan hedduun argamanii akka yaalaman nama gargaara.
BUNAA FI FAYYAA : – Dr Gurmeessaa
Kanneen keessaa kan dhiibbaa dhiigaa akka qaban beekamee qoricha fudhatan hedduu xiqqoodha. Kana malees warrumti dhiibbaa dhiigaa akka qaban baranii qoricha fudhatan illee dhiibbaa dhiigaa qabaachuun isaaniii kan baramu sababa dhukkuba biraaf mana yaalaa deemanii dhiibbaan dhiigaa isaanii achumaan safaramuudhaan malee, ofiin of qorachiianii miti.
Akkasumas dubartii yeroo ulfaa dhukkuba sukkaaraa yeroo ulfaan qabamtee turte, yoo xiqqaate wagga sadi sadiin qoratamuu qabdi. Vaayiresoonni kun yoo osoo hin qoratamiin qaama keessa yeroo dheeraaf turan, tiruu namaa dadhabsiisuun akkasumas Kaanserii tiruu nama qabsiisuun lubbuu namaa galafaatu.
Dhukkuba sukkaaraa, dhukkuba vaayiresii tiruu, dhukkuba vaayiresii HIV, dhukkuba dhiibbaa dhiigaa akka fakeenyaatti haa kaafnu malee dhukkuboonni hedduun qoratamuudhaan irraa faayidaa argannu hedduutu jira. Kanaaf ergaan keenya, utuu qaamni keenya hin miidhamiin dhukkuboota irraa qoratamnee lubbuu keenyaaf gumaacha guddaa haa goonu kan jedhudha. Horaa bulaa Gurmeessaa Hinkoosaa Arsii yuuniversiitii. Skip to content Health.
Dhala dhabuu infertility. Is Corona virus new or it has been there before? CGuraandhala bara Summiilee Faayidaa Qaban Namni yoo dhukkubsatee mana yaalaa deemu, qoratamee dhukkuba isaa addaan baafatee beekee, yooHayyoonni Oromoo fi Oromiyaan qaban ammoo beekumsa adda addaa kan gonfatanii fi beekumsi addunyaa kun kan keessaatti walgaheedha.
Yoo xiqqatee waan baranneen onnanee kaanee uummata keenyaaf yoo gumaachine jijjirama fiduu dandeenya. Midiyaan hawaasaa ammoo bara kana keessa karalee ittiin ummata keenya barsiisuufi beeksisuu dandeenyu midiyaa Waaqni bilisaan banee nuuf kenne dha.
Gurmeessaa Hinkoosaa waliin wal isiin barsiisa. Gurmeessa Hinkoosaa eenyu dha laata? Bara G. C mana barumsaa Makkannisa Addaamoo jedhamtutti barnoota eegale bara G. C qormaata naannoo kutaa 8ffaa qoramee persentaayilii Barnoota sadarkaa 2ffaa mana barumsaa Limmuu Galiilaatti barate bara G.
C qormaata biyyoolessaa kutaa 10ffaa qorame. C qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaa qoramee qabxii fidee gara yuuniversiitii darbe. Yeroo ammaa kana Hospitaala Phaawuloos St. Paul hospital keessaa hojjechaa jira.
Gara facebook seenee page ofii isaatii duraan Dr. Gurmeessaa Hinkoosaa boodana ammoo Dr. Gurmeessaa jedhamu banee. Barnoota akka kennu kan na taasise jedha Dr. Dhaloonni qubee meeshaan isaanii inni guddaan social media Marsaa sabqunnamti dha. Ni dubbisu, yaada kennu, ni gaafatu, abbootii fi harmoolii keenya dubbisuu hin dandeenyeef ammo dubbisanii ibsu jedheen yaade, isaanis taasisaa jiru kanaaf duddubatti waanti na deebisu hin jiru dhaloota qubee waliin fuulduratti tarkaanfanna.
Yeroo ammaa kana Pagen Dr. On face book. Mataa Dhukkubbii Headache. Dhukkuba Vaayirasii Tiruu Viral hepatitis 3. Dhiibbaa Dhiigaa Hypertension 5. Funuuna ykn Dhiiguu Funyaanii Nasal bleeding or epistaxis 7. Dhukkuba Sukkaaraa Diabetes 8. Dhukkuba Kintaarootii Hemorrhoid Gaggabdoo Epileptic seizure Marsaa Laguu Normal menstrual period Dhiibbaa Dhugaatiin Alkoolii Qaama Keenyarratti fidu.
Problem of Alcohol Addiction Yaalii Ajjeechaa Dr. Abiy Ahmad irratti yaalame. Obboleettii haadha mana kootii ulfeesse. Alamuddiin malamaltummaan mootummaa Saudi Arabiyaatin hidhame. Baqqalaa Garbaa Wabiidhan Gadii Lakkifamuufi! Wantootni dargaggoota sodaachisu keessa inni tokko mataa moluu qabaachu dha.
Rakkoo rifeensa mataa namarra sutu kana akkaata ittii gaababsinee ittisnuutu jira. Mataa jiidhaa tasuma hin filatiinaa. Nyaata sirrii nyaachuu. Nyaatota cooma hedduu of keessaa qaban nyaachuu dhiisuu. Bakka isa kanaa nyaata pirootinii garii of keessaa qaban nyaachuu qabna. Yoo ganama dhiqannu shaampoodhaan altakkaa qofa dhiqanna al lama shaampoo itt godhachuu hin qabnu. Cuunfaa qullubbii diimaa, qullubnii adii, zinjibila keessaa tokko walitti makuu hin qabnu halkan rifeensa keenyatti dibannee bulchinee ganama ofirraa dhiqachuu.
Sammuun dhiphachuu stress irraa haga dadeenyetti of eeguu qabna. Gaaffilee keessan gama Facebook Dr. Gurmeessaa ykn marsariitii isaanii irraan qunnamuu dandeessu! Your email address will not be published. Notify me of follow-up comments by email. Notify me of new posts by email. Diraama Dheebuu About Us Nuqunnami.
Afaan Oromo English Amharic. Gulaanta Yaalii Ajjeechaa Dr. Mataa Moluu. Waliif Hiraa:. Seifu 3 years ago. Shekoofeh 3 years ago. Leave a Reply Cancel reply Your email address will not be published. Search for:.Yaalii Ajjeechaa Dr. Abiy Ahmad irratti yaalame. Obboleettii haadha mana kootii ulfeesse. Alamuddiin malamaltummaan mootummaa Saudi Arabiyaatin hidhame. Baqqalaa Garbaa Wabiidhan Gadii Lakkifamuufi! Hayyoonni Oromoo fi Oromiyaan qaban ammoo beekumsa adda addaa kan gonfatanii fi beekumsi addunyaa kun kan keessaatti walgaheedha.
Yoo xiqqatee waan baranneen onnanee kaanee uummata keenyaaf yoo gumaachine jijjirama fiduu dandeenya. Midiyaan hawaasaa ammoo bara kana keessa karalee ittiin ummata keenya barsiisuufi beeksisuu dandeenyu midiyaa Waaqni bilisaan banee nuuf kenne dha. Gurmeessaa Hinkoosaa waliin wal isiin barsiisa.
Bara G. C mana barumsaa Makkannisa Addaamoo jedhamtutti barnoota eegale bara G. C qormaata naannoo kutaa 8ffaa qoramee persentaayilii Barnoota sadarkaa 2ffaa mana barumsaa Limmuu Galiilaatti barate bara G. C qormaata biyyoolessaa kutaa 10ffaa qorame.
C qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaa qoramee qabxii fidee gara yuuniversiitii darbe. Yeroo ammaa kana Hospitaala Phaawuloos St. Paul hospital keessaa hojjechaa jira. Gara facebook seenee page ofii isaatii duraan Dr.
Gurmeessaa jedhamu banee. Barnoota akka kennu kan na taasise jedha Dr. Dhaloonni qubee meeshaan isaanii inni guddaan social media Marsaa sabqunnamti dha.
Ni dubbisu, yaada kennu, ni gaafatu, abbootii fi harmoolii keenya dubbisuu hin dandeenyeef ammo dubbisanii ibsu jedheen yaade, isaanis taasisaa jiru kanaaf duddubatti waanti na deebisu hin jiru dhaloota qubee waliin fuulduratti tarkaanfanna. Yeroo ammaa kana Pagen Dr. Mataa Dhukkubbii Headache.
Dhukkuba Vaayirasii Tiruu Viral hepatitis 3. Dhiibbaa Dhiigaa Hypertension 5. Funuuna ykn Dhiiguu Funyaanii Nasal bleeding or epistaxis 7.
Dhukkuba Sukkaaraa Diabetes 8. Dhukkuba Kintaarootii Hemorrhoid Gaggabdoo Epileptic seizure Imala Dhukkuba Koroonaa, bara G. C haga G. C fiduudhaan lubbuu namaa dabarsaa jirudha. Koroonaa vaayirasiin kan bara G. Kan bara Dubartoota ulfaa garaatti baatan addatti hubuu irratti: Koroonaa vaayirasiin kanneen duraanii lameen dubartoota ulfaa irratti addatti ni cimu.
Dubartoonni ulfaa yeroo sanatti yoo koroonaa vaayirasiin qabaman, carraan lubbuun darbuu isaanii kanneen ulfa hin ta'iin irra olka'aa akka ture, qorannoowwan yeroo sana geggeeffaman ni ibsu.
Koroonaa vaayirasii kan bara kanaa COVID kun garuu qorannoon cimaan jiraachuu baatus, haga ammaa dubartoota ulfaa namoota kaan irraa addatti akka hin hubnedha ragaan jiru. Dubartoota ulfaa fi kan ulfa hin ta'iin haaluma walfakkaa ta'een huba jechuudha.
Saffisaan namaa namatti daddarbuu irratti: Carraan nama qabatan lubbuun dabarsuu koroonaa vaayirasii kanneen duraanii olka'aa ta'us, baay'inaan kan lubbuu namaa dabarse garuu kan bara kanaa COVID ti.
AGM: kilimanie451.spacediin Lukkee fi kilimanie451.spacessaa, Fakkeenya Gaarii Dargaggoota Keenyaa!!💪💪
Kunis akka salphaatti namaa namatti darbuu fi namoota miliyeenotaan lakkaa'aman altakkaatti qabachuu danda'uu koroonaa vaayirasii bara kanaa COVID irraan kan ka'e dha. COVID kun haga nuti yaadnuu ol hawaasaa keessa tamsa'ee akka jiruu fi of eeggannaa hedduu jabaataa ta'e akka gochuu qabnu.
Baay'inni namoota dhukkuba kanaaf qoratamaa jiranii, hedduu xiqqoo akka ta'ee fi mootummaan haga dandeettii isaa qorachuu irratti akka xiyyeeffachuu qabu. Namoota kan lameenitti namoonni dhukkuba kana dabarsan index casenamoota biraa hedduu ta'anitti dabarsanii jiru, yoomii kaasee akka dhukkuba kana dabarsuu eegalanis hin beekamu, amma kanas hawaasa keessa jiru, eenyuummaan isaanii waan hin beekamneef adda baasuunis ulfaataadha, yoo mallattoo argisiisanii gara mana yaalaa dhufan malee.
Hin Yaadda'iinaa, Ofeeggannoo Taasisaa Malee!!! Dhimmi koroonaa vaayirasii COVID nama maratti yaaddoo cimaa akka ta'e akkuma beekamutti ta'ee, yaaddoon kun garuu yoo humnaa ol ta'e, miidhaa geessisa. Inumaa dandeettii dhukkuba loluu qaamaa namaa gadi buusa, dhukkuba biraa illee yoo qabaatan namatti hammeessa, araada hin barbaachifnetti nama geessa, miidhama sammuu fida ykn ha Waa'ee dhukkuba kanaa qofa haasa'uu, dubbisuu fi barreessuu irraa of qusachuun, sa'aa murteessuun waa'ee waantichaa maddeen amanamoo irraa dubbisuu ykn dhaggeeffachuun sirriitti hubachuu.
Qaama keenyaaf ofeeggannoo taasisuu. Kunis haga dandeenye nyaata madaalamaa nyaachuu, sochii qaamaa taasisuu fi hirriba ga'aa rafuu. Alkoolii, tamboo fi wantoota kana fakkaatan ofirraa fageessuu 4. Hojiiwwan ykn waan kamuu yeroo kaan hojjachuu jaalannuu fi kan manatti hojjatamuu danda'an hojjachaa yeroo dabarasuu.
Namoota, firootaa fi hiriyyoota waliin bilbilaanis ta'e karaa miidiyaalee hawaasaa kan biraan walqunnamuu, waliin taphachuu. Vaayirasiin kun yeroo ulfaa fi da'umsaa, haadha irraa gara daa'imaatti akka darbu kan ibsu ragaan hin jiru.
Garuu daa'imman akkuma dhalataniin carraa dhukkubni kun nama biraa irraa itti darbuu isaa olka'aa waan ta'eef eeggaannoo gudYaalii Ajjeechaa Dr. Abiy Ahmad irratti yaalame.
Obboleettii haadha mana kootii ulfeesse. Alamuddiin malamaltummaan mootummaa Saudi Arabiyaatin hidhame. Baqqalaa Garbaa Wabiidhan Gadii Lakkifamuufi! Maalirraa nama qabaa? Furmaanni isaahoo? Qaamni saalaa dhiiraa kan dhaabbatu erection yoo hormooniin sammuu keessaa gadi lakkifamee ujummoolee dhiigaa qaama saalaa dhiiraa keessatti argaman dhiigaan guutuudhaan dhiibbaa pressure uumudha. Haalli kamillee kan kana dangeessu, qaamni saalaa dhiiraa dhaabbatee walqunnaamtii akka hin raawwanne dhorka, osoo fedhii qabuu jechuudha.
Dhibeen kun akkuma umuriin dabaleen dabalaa deema. Dhibee kana kanneen namatti fidan keessaa:. Rakkoo xiinsammuu psychological problems. Kun yeroo hedduu namoota saalqunnaamtii waliin walqabatee miidhama, sodaaa fi kkf qaban. Dhukkuba sukkaaraa. Tamboo xuuxuu. Dhukkuba narvii hidda. Qorichoota adoochan kan akka hashiishii fi kkf.
Qorichoota dhukkuba biraa yaaluuf ajajaman kan akka, antihypertensive, antihistamine, antidepressants, etc. Depression among psychiatric problem fi kanneen biroon illee in jiran. Qoricha kana ajaja ogeessaa fayyaatiin qofa fayyadamna. Midhaawwan cinaa side effects qorichi kun qabu keessaa; mataa dhukkubbii, gadteessisuu diarrheagaraacha dhukkubsuu dyspepsiaoldeebisuu nausea.
Fi kkf. Gurmeessaa hordofaa isiniin jennaa! Ammaa nu erga….
Isiin in Jenna. Thank you Dr. Your email address will not be published. Notify me of follow-up comments by email. Notify me of new posts by email. Diraama Dheebuu About Us Nuqunnami. Afaan Oromo English Amharic.
Gulaanta Yaalii Ajjeechaa Dr. Waliif Hiraa:. Girmaye 4 years ago. Seid genemo 4 years ago. Dagne kebede 4 years ago.Is Corona virus new or it has been there before? CGuraandhala bara G.
Dhuma Adoolessa bara akka addunyaatti dhukkubni kun namoota hubuudhaan kanneen keessaa lubbuu galaafate. Kana jechuun carraan namoota qabate lubbuu dabarsuu dhukkuba sanaa bara sanatti dhibbeentaa 9.
Namoota addunyaa kanarra…. Hagamis barb aachisaadhaa? Ilaalchi osoo hin dhukkubsatiin yaalamuu jedhu biyya keenya keessatti yeroo hedduu kan baratamaa hin taanee dha.
Namoonni yeroo hedduu kan of qorachiisan yoo haalonni gargaraa isana dirqisiisan akka qacarrii hojiiwwan gargaraa, gara biyyoota biraa deemuu fi kkf yoo isaan mudatedha.
Yeroo tokko tokko hawaasa keessatti kan arginu, sadarkaa mana yaalaa deemuu fi qoratamuu irra utaaluudhaan akkanumaan dhukkubsatanii qoricha fudhachuun ni…. Suuta suutaan garuu waanti hin taane hin jiru. Onneen qaama keenya hundaaf akkuma dhiiga raabsitu ofii ishiitiifis dhiiga ni barbaaddi.
Maashaa furdaa muscle ittiin dhiiga qaama hundatti…. Sammuun darbuu Schizophrenia Dhukkubni yeroo hedduu akka naannootti maraatummaa jedhanee beekamu kun dhukkuba sammuu namaa hubuu dha. Nuredin Luke Qaamni Orgaaniin dhiiga keenya dhimbiibee fincaan baasu Kaleen yookiin orgaanonni fincaan qaama keenya keessaa gara alaatti baasuuf tajaajilan kan akka afuuffee fincaanii yoo baakteriyaa dhukkuba fiduun hubaman infekishiin Ujummoo fincaaniitiif nama saaxilu.
Mallatoolee Infeekishiinii Ujummoo Fincaanii: Fincaan nama gubuu ykn yeroo fincaanan miirri akkasii namatti dhagahamuu -Fincaan nama mudduu -Fincaan Dafee dafee dhufuu -Fincaan akka malaa…. Kunis kan ogeessa fayyaatiin ajajamu ykn kan akkasumaan mana qorichaati bitamudha. Karoorri maatii atattamaa kun kan fudhatamu; 1.
Wayita quunnamtii saalaa daangaa hin qabne raawwatan. Osoo kalaanderii fayyadamaa jiranii yoo quunnamtii saalaa dangaa hin qabne raawwatan. Kunis yeroo heedduu tableetiin….
Sinusitis is an infection of one the sinuses empty space in the bone of forehead we have. Dhukkuba Saayinasii Sinusitis Saayinasiin maqaa qaamota keenyaa keessaa tokkooti. Saaynasiin baayyinaan afur kan tahan qaamota keessi isaanii qullaa qilleensaan guutame jiru lafee naannoo funyaanii keessatti argamanidha.
Yeroo kana sinusitis yokaan sinusiin keenya kulkule jenna. Allergic sinusitis kan jedhamu garuu sababa alerjiin kan dhufudha. Baakteeriyaa yokaan vaayirasiidhaan miti. Saayinasiin kun…. Namni gaafa dhiphatu hormonii muddamaa, kortisool, kan jedhamu xannacha adrenalinii irraa baayyinaan madduun qaama namichaa balaa dhufuuf qopheessa.
Yeroo dheeraaf koortisooliin baayyinaan dhiiga isaa keessa tura jechuu dha. Kun immoo fedhiin…. Skip to content. Older posts.
me marta tha jin hoto par dj download
loot box, per il regno unito non si tratta di gioco dazzardo
4chan drug thread
saudi arabia construction cost per square meter
plex transcode ram docker
e36 disable ews
0 thoughts on “Dr gurmeessaa”
© 2020 Dr gurmeessaa | Bootstrap WordPress Theme